Ninkii hogaaminayay Afgembigii Sudan oo is-casilay iyo xiisad taagan
KHARTOUM - General Cawad Ibnu Cawf, oo ah ninkii hogaaminayay afgembigii Khamiistii lasoo dhaafay ka dhacay dalka Sudan ayaa ku dhawaaqay inuu iska-casilay xilkii Madaxa Gollaha Militeriga.
Bayaan uu ka akhriyay TV-ga Qaranka ayuu General Cawad ku shaaciyay is-casilaadiisa, isagoo sheegay in tallaabadan uu u qaadau danaha shacabka Sudan, oo diiday in dalka uu markale galo xukun militeri.
Shacabka dibadbaxaya dhigaya ayaa soo dhaweeyay is-casilaadda General Cawad.
Cawad ayaa u magacaabey xilka uu iska-casilay Gen C/fitaax Cabdiraxman Burhan, oo hogaamin doona Gollaha Militeriga, iyadoo wali shacabka ay wadaan dibadbaxyo ay ku dalbanayaan in awoodda gacantooda lagu soo celiyo, oo la dhiso dowlad rayid ah.
Militeriga qabsaday Sudan ayaa sheegay in dalka ay maamuli doonaan mudo labo sano ah, kadibna ay qaban doonaan doorashooyin guud, balse taasi waxay u cuntami waysay shacabka, oo ka cabsi qaba inay markale galaan xukun kaligii-talis ah.
Ugu yaraan 38 qof ayaa lagu dilay rabshadah Sudan oo soo billwoday December 2018, xilligaasi oo dibadbaxyada lagu dalbanayay inuu is-casilo Madaxweyne Cumar Xasan Al-Bashiir, oo xafiiska joogey 30 sano.
General Cawad Ibnu Cawf ayaa afgembi ku sameeyay Al-Bashiir, oo u ahaa shaqsi aad ugu dhaw oo dhowr jeer xilal usoo magacaabey, sidoo kalena dalacsiin u sameeyay.
Al-Bashiir ayaa markii talada dalka lagala wareegay kadib la sheegay in la dhigay xabsi guri, isagoo lagu hayo meel aan la shaacin oo gudaha Sudan kamid ah.
Ninkan ayaa ku jira liiska shaqsiyaad u dhashay Sudan oo Mareykanka uu xayiraad uu kusoo rogay 2007, isagoo lagu eedeeyay inuu xasuuq ka geystay gobolka Darfur, ee galbeedka dalkaasi, xilligaasi oo uu ahaa Taliyaha Sirdoonka sanadkii 2000.
Waa kuma ninka Cumar Al Bashiir xilka ka tuuray?
Caalamka 11.04.2019. 17:46
Shacabka Sudan ayaa kasoo horjeestay go'aanka Militeriga iyo bandowga cusub.
Xaalad Deg-Deg ah oo lagu soo rogay Sudan iyo Gollaha Wasiiradda oo lakala diray
Afrika 22.02.2019. 23:25
Soomaliya 11.09.2018. 13:11
Digniin culus oo loo diray Soomaalida ku nool Sudan [AKHRI]
Afrika 11.04.2019. 16:31
Dhaqaalaha Sudan oo sii liicaya iyo dowladda oo qorshe cusb soo saartey
Caalamka 30.09.2018. 16:30
Farmaajo oo isku diyaarinaya Safar kale oo Dibada ah [Dalka uu booqanayo]
Soomaliya 01.08.2018. 07:01